ဝဲမပေါက်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ . . . – Healthy Life Journal
၀ဲမပေါက်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ . . .
မေး ။ လူအများနဲ့ ရောနေရပါတယ်။ တချို့က ၀ဲပေါက်တဲ့သူပါတယ်။ အဲဒါ ၀ဲမပေါက်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်သင့်ပါသလဲ။
ပါမောက္ခဒေါ်မြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ ။ ၀ဲမပေါက်အောင် ကာကွယ်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့-
တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုကို ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ အ၀တ်အစား၊ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါ၊ အသုံးအဆောင်စတာတွေကို အတူတူ မသုံးသင့်ပါဘူး။
၀ဲပေါက်နေသူကို သတိထားပြီး သန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်လုပ်စေသင့်ပါတယ်။ ၀ဲရှိသူသုံးတဲ့ အ၀တ်အစား၊ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါနဲ့ အိပ်ရာခင်းတွေကို အနည်းဆုံး ၅၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ခန့် အပူပေးပြီးလျှော်ဖွပ်ရပါမယ်။ မီးပူသေချာတိုက်ရပါမယ်။
Related Items:scapies, Skin Care
ခရီးက ပြန်လာပြီးနောက် သဘာဝကျကျ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း
၅၀ အရွယ်ဆိုပေမယ့် ၃၀ အရွယ်ဟု ထင်ရစေမည့် အသားအရေထိန်းနည်း ၁၀